vaovao diso: Martin Vrijland
Tag: vaovao diso
Tantara tena niavaka tao amin'ny haino aman-jery lasa teo izany. Ary indrindra rehefa mitodika ny dinidinika tamin'ny Ben'ny tanàna Marco Out ao amin'ny tranokalan'ny NOS ianao dia tonga indray amin'ny fahatsapana fahatokisana ny fihetsika. Pedophile izay nodarohan'ny lehilahy 5; iza no tena namono azy […]
Matetika aho no niresaka momba ny teknika izay ahafahana mamorona endri-tsoratra lalina. Ho an'ireo mpamaky vaovao, te-hamerina izany eto aho amin'ny antsipirihany bebe kokoa amin'ny lahatsoratra manokana natokana amin'ity lohahevitra ity. Raha manaraka ny vaovao isan'andro ianao, dia zava-dehibe ny fanamarihanao io resaka io, satria [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Aprily 2019	• 11 Comments
Ny fanafihana tamin'ny alina tao Sri Lanka indray dia nisy fiantraikany lehibe. An-jatony maty sy maratra maro ary fanafihana mitifitra baomba mamono tena any amin'ny toerana maro, miteny aminao ny media. Mahavariana tokoa ve izany? Tena mahavariana fa ny governemanta Sri-Lankan dia mila mamono avy hatrany ny media meda mba "hisoroka ny vaovao tsy mitongilana amin'ny fanaparitahana". Nefa izay [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Janoary 2019	• 7 Comments
Eto amin'ity tranokala ity dia hita matetika ny fomba fitoraham-baovao amin'ny media. Ohatra sisa tavela amin'ny, ohatra, fihetsiketsehana mitaona, izay misy ireo vondrona havia sy havaozina miasa miaraka amin'ny mpihira efa nokarama ary ny korontana dia mihetsika ara-bakiteny eo anoloan'ny fakantsary. Ny Zaons vloggersrel dia tsy inona fa ny fiainana [...]
Mpitsikera hosoka i Arnold Karskens sy ny vaovao sandoka 'Zwartboek NOS news': inona ny fako!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Novambra 2018	• 6 Comments
Talohan'io dia nanipika aho fa i Arnold Karskens dia nitsikera ny tsikera momba ny heloka an'ady, tamin'ny adihevitra diso vitsivitsy ary tsy nanamarika ny heloka bevava lehibe nataon'ny NATO sy ny Holandey. Miaraka amin'ny alàlan'ny 'Novelty NOS journoi' ny zaridaina dia lasa mazava tsara fa nampiasaina izy mba hanongotra ny clown. To vomit [...]
Total visits: 12.929.243